Somalia: Maamulka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in ay qadeen 26 Isbaaro oo yaallay degaanno ka tirsan gobolka - Wargane News
Home Somali News Somalia: Maamulka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in ay qadeen 26 Isbaaro oo...
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan, ayaa sheegay in maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku guuleysteen in ay qadaaan Isbaarooyin yaallay degaanno ka tirsan gobolkaasi.
Maamulka Shabeellaha Dhexe, ayaa sheegay in ay qadeen ku dhowaad 26 Isbaaro, oo lacago sharci darra ah looga qaadi jiray gawaarida dad weynaha ee isticmaalaha waddooyinka isku xira Gobolka Shabeellaha Dhexe.
“Waxaan la dagaalami doonnaa cid kasta oo isbaarooyin sameysata, waxaan dhawaan ku safray degmada Warsheekh iyo degaanno hoostaga Gobolka”, sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha.
Mudane Makaraan, ayaa sidoo kale sheegay in ay dhawaan howlgallo ay ka bilaabi doonaan waddada isku xirta Muqdishu iyo magaalladda Jowhar.
Shan maalmood ka hor, Xarunta taliska ciiidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu soo bandhigay shan nin oo ku hubeysana qoriga AK-47 iyo gaari ay u isticmaalayeen falalka dhaca ah.
Howlgaladan lagula dagaalamayo jidgooyooyinka oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka ayaa imaanaya xilli, dhowaan madaxwyenaha jamhuuiryada Soomaaliya uu ku amray taliska ciidanka xoogga in ay wax ka qabtaan cabashooyinka bulshada Soomaaliyeed ka soo yeeray oo arintaan ku aadan.
Wargane Tv: guddoomiye Muuse Biixi oo Reer Berbera La Dardaarmay